Kevin De Bruyne oo maxkamad ka soo muuqan doona…Sabab? – Gool FM
Kevin De Bruyne oo maxkamad ka soo muuqan doona…Sabab?
Kaafi December 11, 2017
(Manchesterr) 11 Dis 2017. Kubadd abuuraha Manchester City Kevin De Bruyne ayaa lagu soo warramayaa in looga yeeray maxkamad ku taal Luxembourg kaddib markii loo qabsaday aduun dhan £1.4m oo la xiriirta muran xuquuqda sawiradda.
26 jirka waxa uu heshiis la galay shirkad la yiraado Image Rights oo ka rabtay in uu ka caawiyo dhisidda shirkad lagu magacaabo KHDB firm, taas oo lagu eedeeyey in ay sharci ahaan iska diiday bixinta canshuurta looga qaadi lahaa dhakhliga dibadda ka soo gala.
Hadda De Bruyne waxa uu la kulmi doonaa carqalad ku timaadda diiradda ciyaarta u saarneyd waxaana la fahasan yahay in milkiilaha shirkadda xuquuqda sawiradda Fabrice Louette uu ku leeyahay lacag.
Guud ahan, shirkadda Image Rights waxa ay aaminsantahay in £1.4m ay ku leedahay Belgium kaas oo aan meesha ka saari qandaraaskii uu kula jiray markii uu Man City uga soo biiray Wolfsburg 2015.
RASMI: Maxamed Saalax oo ku guuleystay jaa'isadii laacibka Africa ee BBC-da
GOOGOOSKA: SS Lazio vs Torino 1-3 (Lazio oo gurigeeda lagu legdey)